The Somali Dir Clan's History: Codka Beesha Direed: Waa Socotaa... GOORTII DHULKAYAGII LA QEYBSADAY!
Xilliga ay dowladdu guddoonsatay arinkan, ma eyan lahayn qorshe cad oo ku saabsan dhulkii ay qabsan lahayd. Waxaase jirtay aragti u muuqatay qaar kamid ah ragga guddoonka siyaasadeed wax ku lahaa, taas oo ay ku xiisaynayeen degaamo kamid ah bariga qaaradda Afrika. Cristoforo Negri, qudhiisa waxaa uu dowladda u tilmaamay qiimaha istraateejiga ah ee uu leyahay dhulka ku heeran badda Cas, iyo xeebaha geeska Afrika, gaar ahaan kuwa ku wajahan bad-weynta Hindiya ee xilligaas hoos imanayay maamulkii suldaankii Sensibaar Sayid Barqash bin Saciid. Waxaa kale oo uu tilmaamay gobollada bariga iyo bartamaha Somaliya oo ay ka talinayeen salaadiintii Majeerteen.
Waxaa iyana jirtay shirkad gaadiidka maraakiibta oo u kala gooshi jirtay Talyaaniga iyo Hindiya. Shirkaddaas oo la oran jiray Societa Navigazione Italiana.ayaa waxaa lahaa nin Talyaani ah oo la oran jiray Rubbotino. Ninkaas oo u baahday guule ama saldhig marakiibtiisa uu ka dhuxulaysto isla markaasna ka sahay qaato, ayaa wuxuu heshiis la galay sanadkii 1869-kii boqor Cafar ahaa oo la oran jiray suldan Rehiet Beregon. Suldaanku wuxuu Talyaanigii ka iibiyay dakadda Casab iyo dhulkii ku xeernaa. Toban sano dabadeed, sanadkii 1879-kii, dhulkaas iyo dakaddii Casab waxaa rasmi ahaan ula wareegay dawladdii Talyaaniga. Tallaabadaasina waxay ahayd tii ugu horaysay oo uu ku gumaystay dadyowgii geeska Afrika.
Kaddib markii uu biya-mareenka Suways sababay is-beddelkii xoogga lahaa ee ku yimid waddooyinkii ganacsiga ayaa dowladdii Talyaaniga waxaa ay go´aansatay in ay dedejiso mashruuca ay ku doonaysay in ay Afrika ka hesho dhul ay gumaysato, si ay u xoojiso midnimadeeda, isla markaasna ay u kobciso ganacsiga ay dibadda la leedahay.
Damacii Talyaanigu ka lahaa badda Cas iyo dadyowga ku deegaanka dhow ayaa wuxuu noqday mid sugan sanadihii 1870-aadkii, markaas oo uu xoogoobay dhaqdhaqaaqii uu Talyaanigu ka waday degaanka Eriteeriya iyo xeebaha badda Cas. Taasi waxay u gogol xaaraysay damaca gaarka ah ee uu ku doonayay xeebaha Soomaaliya ee ku jeeda bad-weynta Hindiya, taas oo howl-galkeedii uu bilawday sannadihii 1880-aadkii.
Ingiriiska ayaa mar walba dhiiri-gelinayay in Talyaaniga ay u tallaabaan badda Cas, gaar ahaan degmada Masawac oo ay ku yaraanaysay awooddii Turkida iyo Masaarida. 5/ 2- 1885-kii, ciidamo Talyaani ah oo ka kooban 807 nin ayaa waxay qabsadeen degmada Masawac. Ciidamadaas oo uu hoggaaminayay Col. Tancredi Saletta, waxaa taageero siinayay rag hantiilayaal ah oo u dhasahay dalka Talyaaniga. Qabsashada Masawac ayaa waxay Talyaanigu u furtay irridaha uu bariga Afrika ku soo galay. Maalintaas ayuuna kamid noqday dowladihii gumaysatada ahaa.
Talyaanigu wuxuu kamid ahaa dowladihii lagu casumay fadhigii Berliin, laakiinse aanan la awood ahayn dowladihii gumaysiga kaga horeyay. Inkasta oo siyaasaddiisa dibaddu ay difaacaysay heshiisyadii dowladaha Yurub ay ku gaareen shirka, misana majirin dhul cayilan oo dowladihii xoogga lahaa ay u ballan qaadeen Talyaaniga in ay Afrika ka siiyaan. Wasiirkoodii dibadda Pasquale Stanislao wuxuu madashii kala tegay iyada oo loo aqoonsaday xeebaha Soomaaliyeed ee ku sii jeeda bad-waynta Hindiya iyo xeebaha Eriteeriya. Waxaa u weheliyay ballan-qaad ku eg in la xushmeeyo danaha uu ku leyahay badda Dhexe Mediteranean Sea. (C. Zaghi, La conquista della´ Africa. Vol. 1 p. 192).
Waxaa jiray nin ganacsato ah oo u dhashay dalka Talyaaniga magaciisana la´oran jiray Vincezo Filonardo, oo degganaa Sensibaar. V. Filonardo wuxuu si buuxda ula socday dhaqdhaqaaqa ay Jarmalka iyo Ingiriisku ka wadeen bariga Afrika. V. Filonardo dhowr jeer buu dowladdii Talyaaniga ku abuuray dareen, isaga oo warbixinno u diray si uusan Talyaanigu uga qadin sayladaha waawayn ee degaanka ka jira. Talooyinkii uu Filonardo u soo jeediyay dowladdiisii, dhowr sano kadib ayay mira-dhal yeesheen. Sanadkii 1884-kii dowladdii Talyaaniga waxay guddoon-satay in ay howlo sahmin ah ka bilaabaan jasiiradda Sensibaar iyo gobollada koonfureed ee Soomaaliya (Juba iyo Benaadir). (Raffaele Ciasca : Storia coloniale della Italia Contemporanea. Raffaele Ciasca. pp. 15 - 28, 183 - 188. 1938).
Xilligaas, saddex xoog oo gumaysi ayaa isugu yimid Sensibaar. Xoogaggaas oo kala ah Ingiriis, Jarmal iyo Talyaani, ayaa waxay bilaabeen in ay hooshaan hantidii qoyskii reer Sayid Siciid ee muddada qarniga ah ka talinayay degaanka. Halkaas oo jasiiraddii Sensibaar ay ku noqotay meeshii ugu horaysay ee u dhaawacanta boobkii gumaysiga ee bariga Afrika. Jarmalka oo ku socda heshiisyadii Barlin lagu gaaray oo u saamaxayay in dhulka xeebaha ah ee ku yaal bariga Afrika uu si xor ah ganacsigiisa u maro iyo Talyaaniga oo dhowaan yimid isaga oo damac wado ayaa waxay bilaabeen in ay suldaan Barqash u hanjabaan, kaddib markii uu khilaaf dhex-maray iyaga iyo suldaanka.
Qorshihii Jarmalka ee gumaysi-doonka ahaa kuma hakan dhambaalkii suldaanku diray. Balse wuxuu xoojiyay barnaamijkii uu ku doonayay in uu bariga Afrika ku gumaysto. Bishii febrawer 1885-kii, dal-mareen Jarmal ah oo la yiraahdo Wells ayaa wuxuu heshiis la dhigtay suldaan Axmad Samaal oo Soomaali ah, degaankiisuna yahay Wiito. Bishii agosto isla sanadkaas, dal-mareen kale oo la yiraahdo Johlik ayaa isaguna 10 heshiisyo ah la dhigtay duqayda qabaa´ilka sawaaxiliga ah ee ku nool agagaarka buurta Kilimanjaro.
Kaddib markii uu Jarmalku cagaha la helay degaankii gudaha ahaa ee Afrikada-bari, waxaa ku dhalatay in uu boobo meelo kamid ah dekadaha badan ee uu suldaanka Sensibaar bilaashka ku haysto. Sababtuna waxay ahayd in, maamulkiisa gumaysi ee uu ka dhisay gudaha qaaradda, uu u helo irrido ay dunida kala xiriiraan. Jarmalkii ayaa ciidamo ku bixiyay jasiiraddii isaga oo mar-marsiinyo ka dhiganaya in uu edeb u yeelo Barqash si uusan mar danbe ugu dhiiran in uu boqorkooda waraaq canaan ah u soo diro.
Waxaa ciidamada hoggaaminayay nin la yiraahdo Comodor Bashin. Waxay dalkooda ka soo amba-baxeen 11/ 8- 1885-kii. Markii ay soo gaareen Sensibaar, waxay suldaanka u dhiibeen qoraal digniin ah oo ay ku xusan tahay in suldaanku uu ka laabto qoraalkii gilgilashada ahaa ee uu u qoray boqorka Jarmalka iyo in uu oggolaado in si madax-bannaani leh uu ganacsiga uga gudbo dekadaha ku yaal degmooyinka uu suldaanku maamulo.
Ciidamada Jarmalka markii ay soo baxayeen waxay horay u soo wateen gabar la yiraahdo Salma bintu Siciid oo la dhalatay Barqash. Gabadhaas oo horay ula baxsatay sarkaal Jarmal ah ayaa waxay dalbaysay in ay qayb ka hesho dhaxalkii aabaheed Sayid Siciid. Suldaankii waxaa u muuqatay khatarta ku soo korodhay maamulkiisii. Ingiriiskii uu isku halaynayayna waa uu ka gaabsaday in uu gacan siiyo. Wuxuu markiiba isku dhiibay saraakiishii Jarmalka ee duulaanka ahaa. Laakiin wuxuu diiday in uu dekadaha u saamaxo maamulka Jarmalka ama wax ka siiyo amaba ka ijaaro, hadba sidii ay doonayaan iyagu. (Barkhat : 1974. p. 421).
Ingiriiska qudhiisu, dhankiisa ayuu suldaanku ka khasbayay oo culays saaray si uu u oggolaado dalabka Jarmalka. Sidaas daraadeed ayaa suldaankii ula saxiixday Jarmalkii heshiis ay qodobadiisu ka mid ahaayeen :
1. Aqoonsi, maxmiyadaha Jarmalku uu ku yeeshay degaanka gudaha ah.
2. In ganacsigu uu si madax-bannaan u maro dekadaha suldaanku maamulo iyo in mid kamid ah dekadahaas la siiyo Jarmalka, iyadoo la ilaalinayo xushmadda maamulka sare ee suldaanka.
3. In cashuur-qaadku uu caadigiisa u socdo, iyada oo xadka ugu sareya ee la qaado ay noqonayso 5 %.
Kaddib markii uu suldaankii is-dhiibay ayaa dowladaha Ingiriiska, Jarmalka iyo Faransiiska waxay magacaabeen guddi u habeya sidii ay u qaybsan lahayeen dhulkan beylahda ah oo ay muddada ilaashanayeen. Xubnaha Jarmalka uga qayb-galay guddigaas waxaa hoggaaminayay Smith oo ahaa qunsulkii u fadhiyay Qaahira. Ingiriiskana Ketchinr oo ahaa hoggaamiyaha ciidamadii Suudaan ka fadhiyay, Faransiiskana Patromino oo ahaa qunsulkii u fadhiyay Beyruut. Guddigu wuxuu howshiisii ka bilaabay Sensibaar bishii disember 1885-kii. Faransiiska wuxuu damac ka lahaa in uu maamulkiisa ku fidiyo Madagaskar iyo jasiiradaha Comoro oo uu horay u haystay. Suldaan Barqash bin Siciid waxaa loo aqoonsaday maamulka jasiiradda Sensibaar iyo dhulka xeebta ah ee ku beegan jasiiradda. Xuduudda waqooyi ee maamulka suldaanku waxay ku egtahay webiga Taa! ! na. Waqooyiga webiga oo ah dhul ay Soomaalidu wax ka degaan, waxaa loo aqoonsaday Jarmalka. (Ibid : p. 422).
9/ 6- 1886-kii, Jarmalkii iyo Ingiriiskii ayaa heshiis hor leh dhigtay, kaas oo ay ku ciriiryayaan maamulkii suldaanka. Labada dowladood, waxay isla oggolaadeen, degmooyinka hoos yimaada maamulka suldaanku, wixii ka hooseya webiga Taana, in uu ku leeyahay 10 km oo wareeg ah oo keliya. Wixiise ka koreya webiga, uu ku leyahay 5 km oo wareeg ah oo keliya. Wixii dhul ah oo intaa ka baxsan, waxay u bannaan tahay dowlad kasta oo Yurub ah in ay gumaysato.
Bishii sebtember, 1886-kii, guddoomiyihii degmada Laamo ayaa wuxuu xabisay nin u shaqaynayay nin Jarmal ahaa. Jarmalkii ayaa arintaas ka faa´iidaystay oo ciidan ku hareereyay xeebihii jasiiradda, si ay mar kale u edbiyaan suldaanka. Arintaas waxaa ka dhashay in hantidii suldaanka iyo maamulkiisiiba ay qayb-sadaan Jarmal iyo Ingiriis. 26/ 10- 1886-kii, labada dowlad waxay isla gaareen heshiiskan :
1. Labada dowladood waxay aqoonsadeen, suldaanka Sensibaar iyo jasiiradaha u dhow, in uu ka taliyo dhulka xeebta ah ee u dhexeya webiga Mangabi (koonfur) iyo degmada Laamo (waqoyi) masaafo gudaha ah ee dhan 10 mail. Degmooyinka Kismayo, Baraawe, Marka iyo Xamar wareeg dhan 10 mail. Degmada War-shiikh, wareeg dhan 5 mail.
2. Ingiriisku wuxuu oggolaaday in dekadda Dar es Salaam laga ijaaro shirkadda German East Africa Company oo ay iyadu cashuuraha ururiso.
3. In labo loo qaybiyo dhulka xeebta ah ee u dhexeya webiga Taana iyo webiga Rofma, kaas oo uu kala baro webiga Awmbaah. Qaybta koonfurta ah oo ay kamid yihiin degaamada Kilimanjaro, Shaaja iyo Tabiina, waxay hoos imanaysaa maamulka Jarmalka. Qaybta waqooyi ee ku eg harada Victoria, waxaa nasiib u yeeshay Ingiriiska. Labada dowladood waxay ku ballameen in eyan midoodna midda kale ku soo dhul-fidsan.
4. Ingiriisku, saldanadda Wiito iyo xeebaha ku beegan dhulkooda ayuu u aqoonsaday in ay kamid yihiin maamulka Jarmalka.
5. In suldaanka lagu daro dowladaha saxiixay heshiiskii Berliin.
Heshiiskan oo ahaa kii lagu qaybsaday maamulkii Barqash ayaa taariikhdu markay ahayd 22/ 12- 1886-kii, labada dowlad waxay ku khasbeen in Barqash qudhiisu in uu kamid noqdo ragga saxiixay.
Kahor inteyan heshiin Jarmalka, ayaa suldaanka iyo Talyaaniga waxaa dhex-maray sheeko midaan u muuqaal eg. Sheekadaasi waxay bilaabatay mar uu dhamme Cechi codsaday in uu la kulmo suldaanka. Waxaa xusid mudan in suldaanku uu xilligaas weli sheegto in uu ka taliyo qaybo kamid ah degaamada ay ku socdeen arahda Talyaanigu. Cechi suldaankii wuxuu u gudbiyay codsi ah in ay heshiis ganacsi yeeshaan, iyo in ay dowladda Talyaaniga qunsul ka furato Sensibaar. Talyaanigii iyaga oo aanan weli jawaab ka helin dalabkii Cechi, ayaa waxay misana codsadeen in dekadda Kismayo looga kaco si ay ula wareegaan, haddii kalese la siiyo dekad kasta oo kale oo ku taal agagaarka webiga Juba. Ujeeddada uu Talyaanigu marakan lahaa waxay ahayd in uu isku xiro dekadda Casab oo uu markaa haystay iyo dekadda Kismayo. Suldaankii Sensibaar aad buu uga carooday codsiga Cechi! ! , wuxuuna ku sigtay in uu is hortaago dhammaan codsigii Talyaaniga oo idil. Si uusan wada-hadalku u fashilmin, waxaa soo dhex-galay qunsulkii Ingiriiska u fadhiyay Sensibaar oo la´oaran jiray Sir. Kirk. Qunslku wuxuu ahaa nin takhtar ah, baadari ah, dal-mareen ah, in muddo ahna wuxuu deganaa Sesibaar. Sir. Kirk wuxuu ku dadaalay in uu is af-garad ka dhex abuuro suldaanka iyo Cechi. Ugu-dambayntiina wuxuu ku guulaystay in uu heshiis ka dhex abuuro suldaankii iyo kabtankii, kuwaas oo qodobadii ay ku heshiiyeen ay sidatan ahayd :
1. In Talyaaniga la siiyo xoriyad uu dhulka Soomaaliya kaga ganacsado iyo ruqsad uu ku ijaaran karo dhulka, guryaha iyo dukaamada ganacsiga.
2. In dadka Soomaalida ahi eyan xaq u lahayn in ay galaan guryaha dadka Talyaaniga ah.
3. In la´ammaan siiyo dadka u shaqeynaya Talyaaniga.
4. In irridaha loo furo socdaalka ay dadka Talyaaniga ahi ku imanayaan kagana dhoofayaan Soomaaliya.
5. Haddii ay is-qabtaan dad Talyaani ah iyo kuwo reer Yurub ah in arrintooda loo gudbiyo maxkamad.
6. Haddii ay wax dhex-maraan nin Talyaani ah iyo nin Soomaali ah, qunsulka Talyaaniga wuxuu xaq u leeyahay in uu dhexgalo haddii uu ninka ashtakoonaya uu Soomaali yahay ,haddiise ninka ashtakoonaya uu Talyaani yahay dacwadda waxaa goobjoog ka ahaanaya Suldaanka ama ruux ka wakiil ah.
Taariikhda uu heshiiskaasi dhacay waxey ahayd 28/ 5- 1885-kii.
Heshiiskii dabadeed, dowladdii Talyaaniga qunsul ayay ka furteen jasiiraddii, waxayna u soo magacaabeen ninkii ganacsadaha ahaa Vincezo Filonardo.
Iyaga oo isla jaan-qaadaya ayaa ciidamadii gumaysiga ay mar qura bilaabeen in ciidda Soomaaliyeed ay gudaha u soo galaan. Ciidamadaas oo horay u fadhiyay dacallada degaanka ayaa waxaa laga hagayay xarumihii afartii dowladood oo muddada damaca ka lahaa in ay nasiib ku yeeshaan hooshka bulshooyinkii kala qoqobnaa ee beelaha Soomaaliyeed. Arintaasi waxay Soomaaliya ka yeeshay labo qaybood oo midiba ay weji gaar ah leedahay. Qayb waxay ahayd dhul uu ka jiray maamullo iska lahaa hoggaamo siyaasadeed oo urursan, kuwaas oo ka danaysanayay xiriirada kala duwan oo ay la lahaayeen beelihii kula noolaa Soomaaliya iyo xoogaggii shisheeyaha ahaa ee ku soo kordhey noloshii degaanka. Qeybta kale waa meelihii uu ka maqnaa maamul dhexe oo dhaafsiisan kuwii ku jaanta go´naa heer-beeleedka. Taasi waxay sababtay in gumaystayaashu ay ku degdegaan degaamadii beelahaas iyaga oo doonayay in ay ka danaystaan.
Maantii xigtay maalintii magaalada Marka lagu dilay Leuit. M. Talmone ayaa ahayd markii ugu horaysay ee calan Talyaani la suray dhul Soomaaliyeed. Taariikhdaas madow ee u bilaabatay dadkayagii reer miyiga ahaa, waxay ku beegnayd 11/ 10- 1893-kii. Magaalada Marka ayaa waxay ahayd degmada nasiibka u yeelatay ayaan-darridaas. Waxaase dhacday ninkii calanka surayay oo askari Talyaani ahaa in lagu dilay goobtii uu calanka ka taagayay. Ninka wax dilay oo ahaa nin Soomaaliyeed, una dhashay beesha Biyamaal ayaa isla halkii isna lagu dilay. Vicenezo Filonardi, oo aanan horay u qorshaysan in uu qaab dagaal ku qabsado degmooyinka Soomaaliyeed ayaa wuxuu qaaday tallaabooyinkii ugu horeeyey ee ciidameed. Odeyaal kamid ah duqeydii beesha ayuu inta xir-xiray dabadeedna u dhoofiyay Eriteeriya. Waxaa kale oo uu magaaladii la dhacay madaafiic laga soo ridayay markabkii ahaa Staffetta dushiisa. (Italian Colonialism in Somalia. Robert L. Hess. 1966 p. 48 & The Collapse of the Somali State. A. M. I. Salwe, 1994. p. 18).
3. Damaca boqorkii Xabashida, kaas oo degaanka ka waday olole ciidameed oo uu ku dhul fidsanayo. Dhulka Soomaaliduna guud ahaan wuxuu kamid ahaa meelaha u tilmaanaa oo uu Menelik damaca ka lahaa.
Reer miyigii Soomaaliyeed ee ku noolaa baadiyaha Banaadir ayaa markiiba dareensaday dhaqdhaqaaqan shisheeye ee ku soo kordhay noloshii degaanka. Waxaa bilawday kacaamo heer beeleed ah oo aanan isku xilli iyo isku meel ka dhicin. Inkasta oo kacdoonkii beesha Biyamaal uu ahaa midka uguna horeeyay uguna milgaha cuslaa, misana kacdoomada teel-teelka ahaa oo reer miyigii Soomaaliyeed ay kala hor yimaadeen maamulkii gumaysiga iyo raggiisii waxaa laga xusi karaa kacdoonkii beesha Gaaljecel ee uu hoggaaminayay Shiikh Xasan Barsane, kacdoonkii beesha Wacdaan iyo kacdoonkii beesha Abgaal. Kacaamadaas oo midba la xilli ahaa marka Talyaanigu gaaro degaanka beeshu degan tahay, ayaa dhamaantood waxaa hoggaaminayay rag culimo ah oo aqoon wanaagsan u lahaa culuumta islaam-baradka. Reerka Biyamaal oo degaankoodu yahay dhulka u dhexeeya Marka iyo Jamaame ayaa markiiba bilaabay dhaqdhaqaaq mucaarad ku ah maamulkan cusub ee ka abuurmay degaanka, gaar ahaan degmada Marka oo Beeshu ey ku xoogan tahay. Dhallinyaradii beesha ayaa waxay bilaabeen in ay xayiraad ku soo rogaan dhamaan waddooyinka isku xira degmada iyo baadiyaha. Taasi waxay joojisay raashinkii ay degmada ka heli jirtay beeraha iyo xoolaha ay Soomaalidu baadiyaha ku haysteen. Dabadeed Filonardi wuxuu bilaabay in uu magaalada ka quudiyo dhanka badda oo maraakiib ayuu raashin ugu keeni jiray. (The Collapse of the Somali State. A. M. I. Salwe, 1994. p. 18).
Kacdoonkaas hore ee reerka Biyamaal ayaa wuxuu ahaa mid aanan si wanaagsan loo agaasimin, sidaa darteed ma noqon mid dhaawac muuqda gaarsiiyay Talyaaniga. V. Filonardi, qudhiisu maahayn nin diyaar u ahaa in uu dagaal culus la galo beelaha Soomaaliyeed. Wuxuu sitay xoogaa hub fudud ah oo uu Eriteeriya kala yimid, kuwaas oo muddo ugu kaydsanaa bakhaarrada Sensibaar. Hubka culus oo uu isku halaynayay wuxuu ahaa madaafiicda culus ee saarnaa markabka Staffetta, kaas oo heshiisku ahaa in uu muddo afar bilood ah uu soo joogo xeebaha Banaadir(sebtember 1893 - janaweri 1894). Haddii loo baahdona uu ka howl-galo. Howlihii uu Filonardi ka qabay Banaadir waxaa kamid ahaa maamul uu ka dhisay degmooyinkii Soomaaliyeed, kuwaas oo uu madax uga dhigay niman Talyaani ah. Wuxuu dhisay maxkamado uu masuul uga dhigay niman carab ah. Howlaha uu qabtay waxaa ugu cuslaa dhismo gidaar oo uu magaalada Xamar ku soo wareejiyay, cabsi uu ka qabay awgeed, kacdoon kaga yimaada bulshooyinka beeralayda iyo kuwa xoolo-dhaqatada ah ee Soomaaliyeed.
Maamul xumo dhaqaale darteed ayaa Filonardi iyo shirkaddiisii waxaa helay caqabado culus oo eeyan ku tala gelin. Gadoodka beesha Biyamaal ayaa iyana culaab kale ahayd oo hor is-taagtay mashruucii shirkadda. Sidaa darteed wuxuu taageero uga baahday dowladdiisii. Wuxuu u diray farriin uu kaga codsanayo in mar kale wada-hadal lala yeesho suldaankii Sensibaar oo laga codsado in heshiiskii lala dhigtay wax laga beddelo si dhaqaalaha kirada ah oo suldaanka lagula heshiiyay uu wax u dhimo. Heshiiskaa hore ayaa wuxuu dhigayay in suldaanka sanad walba la siiyo dul-saar gaaraya 60 % faa´iidada laga helo dekadaha Soomaaliyeed. Ra´iisul-wasaarihii Talyaaniga ayaa, howlaha ka socda Banaadir, u arkay talo qardajeex ah oo Filonardi uu horseede ka yahay, taas oo aanan natiijo wanaagsan laga filayn. Taasi waxay ka dambaysay war-bixin uu ra´iisul wasaaruhu helay ee ku saabsan maamul-xumida Filonardi. Sidaa darteed waa uu diiday in uu yeelo codsigii Filonardi. Wuxuuna tilmaamay in heshiiska lala galay suldaanka Sensibaar uu yahay mid mudan in la xaq-dhowro. (Italian Colonialism in Somalia. Robert L. Hess. 1966 p. 49. Laga soo xigtay Filonardi Report nr. 221. Zenzibar. December 31. 1893).
Dowladda Talyaaniga, markeedii hore waxay ugu deeqdey shirkaddii Filonardi 300.000 oo liiraha Talyaaniga ah. Heshiiska ay la dhigatay shirkadda waxaa kamid ahaa in ay dowladda u soo celiso kharaj lix biloodle ah oo dhan 160.000 oo liiro. Taasina shirkaddii waa ay awoodi weyday. Filonardi wuxuu filayay in uu taageero ka helo hantiilayaasha Talyaaniga ah oo ay saamiyada shirkadda qeyb xoog leh ka qaataan, iyaduna daah baa helay. Waxaase dhacday in cimrigii shirkadda uusan noqon mid raaga. Sababtu waxay ahayd eedeyn madaxdii shirkadda kaga timid dhanka dowladda Talyaaniga. Maamul-xumida lagu eedeeyay Filonardi waxaa kamid ahaa kharajka badan ee uu geliyay gidaarka uu Xamar ka dhisay. Arrimaha musuq-maasuqa ahna waxaa ugu waynaa laaluush uu hantidii shirkadda ka bixiyay, kuwaas oo uu sii yay qaar amid ah madaxdii dowladda Talyaaniga. Ujeeddada uu ka lahaa ayaa waxay ahayd in madaxdaasi ay gacan ka geystaan socodsiinta howlaha la xiriira shirkadda. Sidaa darteed ayaa shirkaddii waxay awood u weyday in ay bixiso dhaqaalihii lagu lahaa. Waxaa xusid mudan qunsulkii markaas Talyaaniga u fadhiyay Sensibaar Antonio Ceechi, in qudhiisu uu raad ku lahaa kalsooni-xumida ka dhex abuurantay madixii shirkadda iyo dowladdii Talyaaniga.
Shirkaddii waxaa loo diiday qoryo dhowr boqol ahaa oo Sensibaar yiilay, kuwaas oo horay loogu ballan qaaday. Markabkii Staffetta ayaa isna markii ay u dhamaatay muddadiisii, ka baxay xeebaha Banaadir. Bishii abriil, 1894-kii, inteeyan bilowmin bad-xiranka, xafiisyadii shirkadda irridaha ayaa loo xiray. Shaqaalihii Talyaaniga ahaa, Sensibaar ayay u wareegeen. Askartii carabta ahayd ee u shaqaynayay shirkadda, xataa waxaa loo waayay qoryo ay isku difaacaan. Dabadeed Filonardi, wuxuu ku dadaalay in dowladdiisa uu qanciyo si ay u taakulayso shirkadda. Wuxuu tallaabadan ku tilmaamay mid dadka iyo dowladda Talyaaniga u keeni karta magac-xumi. Qoraal cabasho ah oo uu u diray dowladdiisii ayuu sidan u qoray:
Dowladdii Talyaaniga, dheg uma raaricin cabashadii Filonardi. Dowladdii Ingiriiska oo arintan la socotay ayaa qoraal u dirtay Talyaaniga ay ku waydiinayso in ay ku tala jiraan in ay isaga baxaan Banaadir. Qoraalkaas dabadiis, muddo laba toddobaad ah ayaa Talyaanigii waxay u magacaabeen degaanka Banaadir qunsulkoodii fadhiyay Sensibaar Antonio Ceechi. (Italian Colonialism in Somalia. Robert L. Hess. 1966 p. 50).
Antonio Ceechi oo horay u ahaa ninka ay dowladdu u dirtay in uu daba-gal ku sameeyo howlaha shirkadda ayaa markii uu la wareegay masuuliyaddii shirkadda ka beddelay magacii oo ku magacaabay Sociata Anonima Commerciale Italiana del Benadir. Isla markaas Filonardi waxaa la gaarsiiyay in uu maamulka shirkadda madax ka ahaado si looga faa´iidaysto khibraddiisa. Mushaharka loo ballan qaaday ayaa wuxuu ahaa 30.000 oo liiro sananadkii. Waxaa kale oo jiray ganacsade Talyaani ah oo xagga dowladda laga soo magacaabay in uu kamid noqdo howl-wadeennada shirkadda. Ninkaas oo magaciisa la yiraahdo ayaa Giacoma Trevis ayaa wuxuu degaan u doortay magaalada Baraawe.
Dhan kale dowladda Talyaanigu, waxay xilligaas isu diyaariaysay duulaankii ay ku qaaday Xabashida ee la magac baxay Cadawa. Dowladda ayaa u baahnayd dhaqaale badan oo ay ku bixiso mashruucii dagaalkaas. Xilligaas Talyaanigu ma uusan haysan dhaqaale ku filan howlaha dowladeed ee dalka gudihiisa. Sidaa darteed ayaa Barlamaanka waxaa ka dhici jiray doodo culus oo ay siyaasiyiintu isku dhaafsanayeen aragtidooda. Qoraallada ii soo diro General General Oreste Baratieri, oo ahaa hoggaamiyihii maamulkii Ereteeriya, ayaa waxay ahaayeen kuwo barlamaanka laga akhriyo. Ugu danbayntii, jananka waxaa loo ansixiyay in la siiyo taakulaynta uu u baahan yahay idaylkeed.
Ogow oo waa raggaas iyo jaalkood kuwa ina gumeeyay fac hore iyo fac danbe. Waa kuwaas kuwa aasay magaca iyo maamuuskii ummadeed ee lagu yiqiin awoowayaashii hore ee Soomaaliyeed. Waa kuwaas kuwa tallaalay ragaadka taariikheed ee umaddayadu la kici la´dahay. Waa kuwaas .....
Bishii nofember 1895-kii, dowladdii Talyaaniga waxay u yeertay qunsulkeedii Sensibaar Antonio Ceechi, si ay ugala xaajooto arimaha ku saabsan maamulka gumeysi ee Banaadir. Qunslkan ayaa markuu gaaray Talyaaniga, wuxuu socdaalkiisii ka bilaabay degmada Milaano si uu u dhiiri-geliyo hantiilayaasha diyaarka u ah in ay ka qayb-qaataan saamiyada hore ee lagu khamaarayo, kuwaas oo ay shirkadda ku fulinayso qaybaha hore ee mashruuca ay ku hooshayeen dhulkii Soomaaliyeed. Shirarkii badnaa ee uu ku qabtay magaalada Milaano ayaa waxaa ka dhashay in A. Ceechi la raaciyo siddeed nin oo kamid ah xubnihii saamilayda ahaa. Ujeeddadu waxay ahayd in ay wax ka maamulaan mashaariicda hooshka Banaadir. Hantiilayaasha degmada Rooma ayaa ka gaabsaday arintan. Iyagu waxay doonayeen in marka hore ay arkaan in dowladdu ay si xoog leh faraha ula gasho howlaha ay ku gumeynayeen dadkayagii ku noolaa gobolladaas. (Italian Colonialism in Somalia. Robert L. Hess. 1966 p. 55-56).
15/ 4- 1896-kii, A. Ceechi wuxuu dhisay shirkaddii la magac-baxday Sosieta Anonima Commerciale Italiana del Benadir. Inkasta oo dowladdu ay qunsulka ka codsatay in si nabadgelyo leh uu ku dabaalo dhismaha maamulka Banaadir, misana dowladdu waxay ka gaabsatay in ay dusha ka ilaaliso gabood-falka ay kula kacayaan dadka ay gumaysanayaan. Sidaa darteed buusan maamulkan ka arxan roonaan kuwa kale ee goballadeena wax ka hooshayay ee isugu jiray Xabashi, Ingiriis iyo Faransiis.
Francesco Crispi oo ahaa ra´iisul wasaarihii Talyaaniga muddadii u dhexeysay 1893- kii iyo 1896-kii ayaa wuxuu kamid ahaa sababaha uu qunsul A. Ceechi ugu soo guuleystay socdaalkiisii. F. Crispi wuxuu ahaa nin qabay in uu siyaasadda Talyaaniga ku soo kordhiyo is-beddel xagga dhaqaqalaha ah. Wuxuu doonayay in uu wax weyn u qabto beeraleyda Talyaaniga oo sababtooda ay la dhacday dowladdii isaga ka horeysay. Sidaa darteed, meelaha istraateejiga ah oo uu Crispi isha ku hayay waxaa kamid ahaa dhulka ay doonayeen in ay Soomaalida ka boobaan. Waxaa kale oo iyana jiray laba markab oo kuwa wax bambeeya ah oo ay dowladdu u ogolaatay in qunsulka la raaciyo si ay uga howl-galaan xeebaha Soomaaliyeed. Maraakiibtaas mid wuxuu ahaa Staffetta, kan kalena waxaa la oran jiray Volturno.
Waxaa xusid mudan, sanadkii ka horeeyay sanadka aanu ka sheekeenayno (1895-kii), in uu ku beegan yahay xilligii uu xajka u kacay halyeygii weynaa, aabihihii qowmiyadda Soomaaliyeed, sidihii calanak jihaadka, Sayid Maxamad Cabdulle Xasan. Isaga oo da´diisu tahay 30 jir ayaa waxay xajka isu raaceen 13 nin oo ay kamid yihiin laba abtiyaashiis ah oo lakala yiraahdo Xaaji Aadan Seed iyo Obsiiye Seed.
Xilligaas waxaa toban sano ay ka soo wareegatay fadhigii boobka ee Barliin. In badan oo go´aamadii fadhiga kamid ahna waa ay hirgaleen. Nadaamkii embriyaaliga ahaa ee gumeysiga ayaa wuxuu taabtay ummadihii ku noolaa qaaradaha Aasiya iyo Afrika, gaar ahaan dhulalkii ay deganaayeen qowmiyadaha Islaamka ah. Sidaa darteed ayaa xujayda iyo ardayda isugu yimaada xaramka, waxay is-dhaafsan jireen wararka murugada leh oo tilmaamayay xaaladaha ay ku sugan yihiin ummadahaas ayaan-darridu heshay. Waxaa kale oo ay is-dhaafsan jireen sheekooyinka xiisaha leh ee ku saabsan kacdoomadii lagu diidanaa qorshayaasha gumeysiga oo ay hoggaaminayeen culimadii dadyowgaas la boobayay. Waxaa kamid ahaa kacaamadii ka socday aasiyada dhexe, kacdoonkii Bakistaan iyo kacdoonkii Suudaan ee uu hoggaaminayay Mahdiga.
Waxaa kaloo jiray wadaad xaramka joogay oo la oran jiray Shiikh Maxamad Saalax. Wadaadkan oo ahaa ninka asaasey dariiqada Saalixiyada, ayaa odey u ahaa dariiqada. Sayid Maxamad oo xaramka ku sugnaa muddo laba sanadood ah, ayaa culimo uu kamid yahay Shiikh M. Saalax wuxuu ka bartay jaadadka kala duwan ee culuumta Islaamka iyo nadaamka dariiqada Saalixiyada. Waxaa kale oo uu sheekooyin badan ka soo dhegeystay dhaqdhaqaaqii caalamiga ahaa oo embriyaaliyaddu ay wax ku hooshayeen iyo xoogaggii ka soo hor-jeeday. Kaddib shiikhu wuxuu ku soo laabtay dalka, isaga oo aqoonta diiniga ah ka sokow, xambaarsan aragti lagu diidan yahay gumeysiga.
Bilowgii bishii mey 1896-kii, qunsul A. Ceechi ayaa ku soo laabtay Xamar, isaga oo guul siyaasadeed iyo mid dhaqaale sita. Wuxuu waraaq u waday guddoomiyihii shirkadda V. Filonardo, ay ku xusan tahay goorta uu xilka wareejin doono. Waraaqdaas oo Ceechi uu gaarsiiyay guddoomiyaha 11/ 5- 1895-kii, waxaa ku qornaa in Filonardo ay shaqada kaga egtahay 15/ 7- 1895-ka.
Sanadkii 1896-kii, dhacdada ugu milgaha culus ee Talyaaniga uu kala kulmay geeska Afrika ayaa waxay ahayd jabkii ka qabsaday dagaalkii Cadowa. Dagaalkaas oo dhex maray ciidamadii Talyaaniga ee fadhiyay Eriteeriya iyo kuwii Xabashida ayaa wuxuu ahaa natiijo ka dhalatay is maan-dhaaf ka yimid heshiiskii Uccialli oo ay labada maamul kala saxiixdeen 2/ 5- 1889.
Heshiiskaas oo sida aanu soo xusnay qodobkiisa VII-aad ay labada maamul midba si u fasirtay ayaa waxay dhalisay in lakala gar qaadan waayo. Talyaanigu wuxuu doonayay in uu qodobkaas ku khiyaano Xabashida oo uu oggoleysiiyo in ay maxmiyad u noqdaan. Menelik, oo damaciisa gumeysi ka sokow ahaa nin waddani, ayaa ka madax adaygay qorshihii Talyaanigu ka rabay. Boqorkan ayaa xilligaas isu diyaarinayay in uu hanto talada dhamaan dadyowga masiixiga ah ee Tigray iyo Amxaaro, dabadeedna uu u tallaabo in uu wax ka hoosho qowmiyadaha la deriska. Wuxuu diiday wax kasta oo hadiyad ah oo uu Talyaanigu damcay in uu ku qanciyo. Ruushka iyo Faransiiska oo iyagu kaalmo hagar la´aan ah la garab taagnaa boqortooyada Xabashida, ayaa hor is-taagay fasirka uu Talyaanigu ka qaatay heshiiska. Dowladihii Yurub intoodii kale waxay la aragti noqdeen Talyaaniga. Taasi waxay hoos u dhigtay kalsoonidii dhex-tiil boqorkii Xabashida Menelik II iyo boqorkii Talyaaniga Umberto I, taas oo jiitamaysay tan iyo sanadkii 1890-kii.
Waxaa dhacdadan ka horeeyay in sanadkii 1894, uu is-beddel xoog leh ku yimid cimiladii siyaasadeed ee maamulkii Menelik. Taasi waxay ka dambaysay markii hoggaamiyayaal Xabashi iyo Tigray ah ay oggolaadeen in ay si buuxda u hoos yimaadaan taliska boqor Menelik II. Waxaa raggaas ugu weynaa Ras Mangashe oo ahaa curadkii boqorkii Tigrayga ee la oran jiray Yohannes IV. Markaas ayuu Menelik qaatay naaneysta ah Negusa Nagast (boqorkii boqorrada). Halkaas ayuu Menelik wuxuu ku helay awood uu ku soo ururin karo ciidamo gaaraya 200.000, kuwaas oo kala-bar in ka badan ay sitaan hub casri ah.
Talyaaniga oo horey saaxiib wanaagsan ay ahaayeen Xabashida, isla markaasna u fidiyay tageero xoog leh oo hub ah ayaa wuxuu malaysan waayay in Xabashidu diidaan dul-maamulkiisa. Sidaa darteed dowladdii Talyaaniga, iyada oo iska indha tiraysa xooga halkaas fadhiya, ayaa waxay guddoonsatay in ay ku duusho Xabashida oo ay xoog ku qabsato. Amar dowladda ka yimid ayuu General Oreste Baratieri ku dhaqaaqay, isaga oo hoggaaminaya 25.000 oo isugu jira Talyaani iyo Eriteeriyaan. Waxay qabsadeen saddex degmo ee ku yaal waqooyiga Itoobiya Adigrat, Cadowa iyo Maqdalla. Dabadeed Menelik oo u habar-wacday qowmiyadihii uu u talinayay ayaa wuxuu la soo baxay ciidan dhan 196.000. General O. Baratieri ayaa dib u gurtay si uu u helo xoog uu dowladda ka sugayay. Inkasta oo jananka uu helay taakulayn siyaado, misana taasi ma-noqon mid ay kaga guulaystaan ciidamadii Xabashida.
Dagaal weyn oo labada ciidan dhex-maray ayaa ka dhacay agagaarka degmada Cadowa, 1/ 3-1896-kii, wuxuu socday maalintaas labadeedii gelin. Natiijadii dagaalkaas waxay noqotay in Talyaanigii la jebiyo. Waxaa laga dilay ciidamo isugu jira 286 sarkaal iyo tiro ku dhow 5.000 oo askari, kuwaas oo kala-bar ay Talyaani ahaayeen. Tiro intaa ka badan ayaa waxay ahaayeen wax la dhaawacay, wax la waayey iyo wax maxaabiis ahaan loo qabsaday. Dhaawacaas oo ah midkii ugu weynaa oo gumeysatadii reer Yurub ay Afrika kala kulmaan ayaa Talyaanigii wuxuu ku reebay khasaaro dhaqaale oo gaaraya 13.000.000 oo liiro.
Dagaalkaasi siyaabo kala duwan ayuu raad ugu yeeshay geedi-socodkii gumeysigii ku soo qul-qulayay geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya. Dhaawaca ciidamadoodii gaaray darteed ayaa dagaalkii wuxuu caajis badan ku reebay mashruucii gumeysi-doonka ahaa ee dowladda Talyaaniga ay ka wadday geeska Afrika. Halka uu dar-dar iyo xowli-orod ku kordhiyay barnaamijkii Xabashida.
Waxaa kale oo xusid mudan, in Talyaaniga uu markiisii hore oo xiiso u hayay codsigii ka yimid boqor Cismaan iyo suldaan Keynadiid ee ku saabsanaa in ay ka hor-tagaan dhaqdhaqaaqa ciidameed ee uu Menelik ka waday dhulka Soomaalidu degaan, isla markaasna ay ka kiciyaan degmada Harar, haddii uu siiyo hub ay ku diriraan 50.000 oo nin. Dalabkii codsigaas ayaa wuxuu la fashilmay qorshayaal gumeysi-doon ahaa oo Talyaaniga kaga gubtay dagaalkii Cadowa. (Italian Colonialism in Somalia. Robert L. Hess. 1966 p.126).
13/ 11- 1896-kii, ciidamo Xabashi ah oo gaaraya 1000 ayaa waxay soo gaareen degmada Luuq. Ciidamadan oo uu hoggaaminayay Dadjazmatch Wolde Gabre waxay degmada ugu yimaadeen ciidamo Talyaani ah oo uu taliye u ahaa nin la yiraahdo Cap. Ugo Ferandi. Ciidankii Talyaaniga ayaa ku sgnaaday xeryahoodii oo aanan muujin wax dhaqdhaqaaq ah muddadii ay Xabashidu joogeen degaanka, sidaa darteed ayaanay labada ciidan eeyan wax isu yeelin. Ciidamadii Xabashida oo socodkoodii sii wata waxay u kaceen dhanka bari iyo gobolka Bay. Faduul badan oo ay kula kaceen dadkii Soomaaliyeed ee degaanka ku noolaa ayaa waxay sababtay in beelihii Digil iyo Mirifle ay sutida u qabtaan ciidamadan ku soo xad-gudbay. Kaddib markii la naafeeyay Xabashidii ayay halkoodii ku noqdeen. (Italian Colonialism in Somalia. Robert L. Hess. 1966 p.63).
Dowladddii Talyaaniga oo ku qanacday jabka ka soo gaaray Cadowa ayaa waxay ku deg-degtay wada-hadal heshiis nabadeed oo ay la yeelato Xabashida. Talyaamigu wuxuu u baqay in Eriteeriya ay gacantiisa ka baxdo oo ay Xabashidu la wareegaan. Arintaas ayaa sababtay heshiis nabadeed oo ay labada dal kala saxiixdeen dabayaaqadii sandka.
Bishii nofember 1895-kii waxaa soo cusboonaaday colaaddii Talyaaniga iyo beesha Biyamaal. Taasi waxay ka dambeysay dil loo geystay qaar kamid ah shaqaalihii Talyaaniga. Ragga la dilay waxaa u weynaa Giacoma Trevis oo ahaa ganacsade kamid ah masuuliinta shirkadda. Talyaanigii, oo sida u caado ahayd, bilaabay in uu ka aarsado dadkii rayidka ahaa, ayaa sababtay in magaaladii Marka ay markale noqoto gol colaadeed. Is ugaarsi iyo aarsi ka dhex-bilowmay shaqaalihii Talyaaniga iyo beesha Biyamaal ayaa muddo sanad ah socotay, taas oo ku danbeysay in dilo qonsulkii Talyaaniga Antonio Ceechi.
Talyaanigu wuxuu in muddo ah ku haminayay in maamulkiisa uu gaarsiiyo dhulka gudaha ah ee gobolka Banaadir, gaar ahaan tuulooyinka ay ka taliyeen beesha Gelledi oo ahaa seyladaha u dhexeeya ganacsiga dhulka gudaha ah iyo degmooyinka xeebaha ku yaal ee Banaadir. Iyada oo la baadi-goobayo arintan, ayaa arah ballaaran oo laga soo ansixiyay xagga dowladda Talyaaniga waxay bilawday in ay ka baxdo Xamar 25-kii bishii nofember 1896-kii. Arahda oo uu hoggaaminayay qunsul A. Ceechi, waxaa weheliyay Commander Ferdinando Maffei oo ahaa hoggaamiyihii Staffetta iyo Commander Francesco Mangiardin oo isna ahaa hoggaamiyihii Volturno. Waxaa kale oo la socday 14 nin oo badankoodu ahaayeen saraakiishii labada markab. Raggaas oo si xoogan u hubysnaa, waxaa weheliyay 70 askari oo ilaaladooda ahayd.
Kaddib markii uu gabalkii dhacay, arahdii waxay ku furteen meel Xamar u jirta 12 mail. Goor ay fiidkii tahay waxaa helay weerar ay garan-waayeen cidda ka dambeysay. Inkasta oo ay iska caabiyeen, misana habeenkaas waxaa ay seexdeen iyaga oo ka shaki ka qaba colka soo weeraray, Xabashi iyo Soomaali cidda ay yihiin. Shakiga ay arahdu habeenkaas la seexdeen ma noqon mid raaga. Subaxnimadii ay bishu ahayd 26/ 11- 1896-kii, iyaga oo isu diyaariyay in ay dhaqaaqaan, ayaa si kedis ah lagu soo weeraray. Marakanse weerarku waa uu ka habeysnaa kii hore. Muddo daqiiqado ah ayaa waxaa lagu laayay 14 kamid ah xubnihii arahda, kuwaas oo ay kamid ahaayeen qunslkii A. Ceechi iyo madaxdii labada markab. Askartiina waxay noqdeen wax la laayo iyo wax carara. Lafihii dadkaa la laayey oo muddo warnaa dhulka ayaa sababay in degaankii loogu magac-daro Lafoole. Waana meesha ay inooga dhisnayd, waageynu aadamiga u ekeyn, kuliyaddii ay macallimiinta inooga soo qalin-jebin jireen.
Posted by DIRSAME at 7:12 AM